FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA ANAREO! – filazantsaramada
FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA ANAREO!
Publié parfilazantsaramada	 octobre 9, 2015 octobre 8, 2015 Laisser un commentaire sur FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA ANAREO!
« Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo! » Galatiana 5:4
***I Paoly Apostoly dia manambara ao amin’ny epistily ho an’ny Romana fa ny marina amin’ny finoana no ho velona. Tany amin’ny Testamenta Taloha dia nisy ohatra ny amin’i Abrahama izay nohamarinina tamin’ny finoany an’i Jehovah Andriamanitra, ary maro ireo olona tamin’izany vanim-potoana izany no nahazo izany fanamarinana tamin’ny finoana an’i Jehovah Andriamanitra izany.
***Aty amin’ny Testamenta Vaovao kosa dia niditra an-tsehatra Ilay Zanak’Andriamanitra voalaza fa Zanak’ondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao. Ary izany asa nataon’ny Zanakondry tsy misy kilema izany no manamarina izay mandray ny ràny ho fanadiovana ny fahotana. Ny finoana an’i Kristy dia mahatonga ny olona iray hahazo fanamarinana, ary mitafy izany fanamarinana izany ka i Kristy no ambara fa fitafiana, ary azo ambara koa fa tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny!
***Ny lalàna dia natao ankatoavina, ary mitaky ezaka avy amin’ny olona izay ametrahana izany lalàna izany. Ny zanak’Isiraely dia nomen’i Jehovah lalàna, nefa raha ny marina dia tsy tanteraka ny fanarahan’izany firenena izany ny lalàna. Dia mipetraka ary ny fanontaniana. Nahatanteraka izany lalàna izany ve ireo olon’i Jehevah tao amin’ny Testamenta Taloha. Ny azontsika raisina akaiky dia ny tantaran’i Abrahama ihany satria olona tena nifanerasera tamin’Andriamanitra izy ary azo lazaina hoe nifankatia tamin’i Jehovah. Izany fifaneraserana tamin’i Jehovah izany no nananany finoana an’Andriamanitra ka nanitsiany ny diany.
***Aty amin’ny andron’ny Testamenta Vaovao, ny tenin’i Jesosy Kristy dia manambara fa raha tsy miray Aminy ny olony dia tsy mahefa na inona na inona.
*** »Raha tsy miova hianareo, ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Ny zaza mantsy dia tsy maintsy miankina amin’ny mpitaiza azy, ary ny mpitaiza dia ny Fanahy Masina, (Ray, Zanaka, Fanahy Masina) raha tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra. Koa tsy ny halehibe, na ny harena, na ny fahendrena, na ny tanjaka, na ny fahakelezana, na ny fahosana, na zavatra hafa, fa ny fanamarinana avy amin’i Kristy irery ihany no mahamarina ny olona iray. Ny hany azontsika atao izany dia ny manaiky hohamarinina na lehibe na zaza!
Publié parfilazantsaramada octobre 9, 2015 octobre 8, 2015 Publié dansUncategorized